Robot na -ekpofu ikuku - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Ajụjụ FAUCI na -ekpochapụ ikuku robot
Kedu ka igwe robot a na -ekpo ọkụ si arụ ọrụ?
Azịza: Robot ahụ dabara ka etinye ya na oghere nwere ala dị larịị na mpaghara nha kwesịrị ekwesị. Mgbe ịmechara ntọala dị mkpa dịka ntuziaka ọrụ si dị, wee mee usoro ọrụ dị iche iche, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma.
Kedu ka robot a na -ehicha ihe na -esi ehicha ma na -asachapụ?
Azịza: Robot a na -eji akpa ọgwụ mgbochi mpụga iji na -arụsi ọrụ ike wepụta ihe na -egbu egbu dị ọcha na ihe na -eme ka ọ dị ọcha, na mgbe ọ na -arụ ọrụ ebe niile, ọ na -agbasa ikuku dị ọcha na ihe na -eme ka ọ dị ọcha n'ime ikuku gburugburu robot site na ikuku ikuku nke akpa disinfection. Na -egbochi ma na -egbu nje ma ọ bụ nje n'oge ọ bụla nke nwere ike ịpụta na ikuku.
Kpọsị, robot a na-ehicha ihe nwere ike igbu COVID-19 na ụdị ya?
Azịza: Imirikiti ngwaahịa ndị dị n'ahịa bụ tumadi na -agba ọgwụ na -agba mmiri, nke na -efesa mmiri hypochlorous ma ọ bụ chlorine dioxide n'ime ikuku n'ụdị aerosol iji gbuo nje na nje na ikuku. Hypochlorous acid ga -emepụta ikuku chlorine n'ụzọ na -apụtachaghị ìhè, na mkpokọta nke ikuku nke chlorine dioxide ngwọta dị oke elu, nke ga -emebi ahụ mmadụ. A machibidoro ọgwụ mgbochi mmiri alụlụ ndị a n'ihu ndị mmadụ. Ọzọkwa, a na -awụsa ihe na -egbu anwụrụ ọkụ n'ikuku, yabụ na ọ bụ na -ekesaghị ya nke ọma, na -eme ka nsị na arụmọrụ sterilization dị ezigbo ala.
Ihe FAUCI AAPG wuru na FAUCI Air Disinfecting Robot ji nwayọ wepụta ụmụ irighiri klorine dioxide dị ọcha ma dị mma yana ion oxygen na -arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ọ na -agbachi nkịtị ma na -egbu ụmụ nje ozugbo na ikuku, nke enwere ike igbochi ma chịkwaa ya ozugbo. Ọzọkwa, ọnụọgụ ịchekwa ihe dị oke ala nwere ike ibute nsachapụ nke ọma yana mmetụta nsacha, ọ gaghịkwa emerụ ndị mmadụ nọ n'otu ọnụ ụlọ ahụ.
Usoro mgbatị ahụ nke Robot Disinfecting Robot a ọ dị mma iji?
Azịza: Ọdịdị oxygen na-arụ ọrụ ROS nke arụpụtara n'elu ihe arụpụtara n'ime FAUCI AAPG nke ngwaahịa a bụ otu ihe kacha mkpa na enweghị ikewa n'ahụ mmadụ nke na-egbu nje na nje. Ọ bụkwa ihe ebumpụta ụwa ma dịkwa n'ime akara. Ọ bara uru na adịghị emerụ ahụ mmadụ;
N'otu oge ahụ, ihe robot wuru n'ime ihe FAUCI AAPG gafere ule CMA/CNAS dị mkpa: a na-egosi nkwubi okwu nnwale nsị na-adịghị egbu egbu; mmechi ule micronucleus sel bụ ihe ọjọọ niile, nke pụtara na enweghị mmụba anụ ahụ selụ na enweghị nsí mkpụrụ ndụ ihe nketa;
Kedu ule na asambodo ka robot a na -ehicha ihe nwere ugbu a?
Azịza: Robots anyị agabigala nyocha dị mkpa nke ngalaba asambodo ndebanye aha nke CNAS, wee nweta asambodo EU CE-ROHS, asambodo FDA, asambodo MSDS, Nnwale nnwale nsị nsị, H1N1 Nlele Nje Virus, Staphylococcus Albus Test Report, Human Akụkọ nyocha Enterovirus 71, Akụkọ nnwale Escherichia Coli.
Kedu ihe ị ga -akpachara anya maka iji robot na -ekpo ọkụ?
Mgbe a na -adọba robot, ọ ga -anọrịrị ihe karịrị otu mita site na ihe igwe na uwe;
Ọ bụrụ na robot na -ekpo ọkụ na -aga n'ihu na -arụ ọrụ n'ime ụlọ, nkpuchi ka dị mkpa?